Paid user ကဏ္ဍသစ် အနေနဲ့အထူးကျူရှင်ကျောင်းတော်သား လယ်ဘယ် ကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အမှတ်မရနိုင်တဲ့ ကျောင်းသားများ အတွက် ရော ၊ ကျောင်းရေရှည်ရပ်တည်ရေး အတွက် ရံပုံငွေ ရနိုင်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီအဆင့် ကို ဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ၃ လ အတွက် USD $5 နှုန်း သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ paid member များ အနေနဲ့အပေါ်အဆင့် ကျောင်းသားကြီး နှင့် စီနီယာ အခန်းများကို ၃ လ ဝင်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ရရှိလာတဲ့ ရံပုံငွေကို ကျောင်းနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းရန်နဲ့တခြား အကျောင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အထူးအစီအစဉ်များမှာ အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Payment ကိုတော့ PayPal account အပြင် Credit or Visa card တို့နဲ့ပေးနိုင်အောင် လုပ်ထားပါတယ် ။ မိမိတို့ရဲ့ Profile မှာ (Profile) (Actions) (Paid Subscription) ကိုနိပ်ပြီး အထူးကျူရှင်ကျောင်းတော်သား အဆင့်ကို ရယူလိုက်ပါ ။ အသေးစိတ် အချက်လက်များ http://achittatkatho.net/index.php?topic=10915.0 ဒီနေရာမှာ သွားဖတ်ကြည့်ပါ ။
ဟာသ၊ ဥာဏ်စမ်း (Moderator: tunaye2011) »
Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493942 times)
« Reply #260 on: June 06, 2011, 04:32:52 PM »
အမြဲမှန်နေတဲ့ ဦးမှန် ...
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကျေးလက်ဒေသတစ်နေရာကိုသွားပြီး ရိုက်ကူးရေး ဆင်းကြပါတယ်။ တစ်နေ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ပြင်နေတုန်း အဘိုးအို တစ်ဦးရောက်လာပြီး
"ဒီနေ့တော့ မင်းတို့ မရိုက်တာကောင်းတယ်၊ မိုးရွာ မှာကွ"လို့ပြောပါတယ်။ တကယ်လည်း အဲဒီနေ့ကအဘိုးအိုပြောတဲ့အတိုင်းမိုးတွေရွာလို့ ရိုက်ကူး ရေးတွေဖျက်လိုက်ရပါတယ်။
အဘိုးအိုက သုံးလေးရက် ဆက်တိုက်လာပြီး "ဒီနေ့တော့ နေသာမယ်၊ ဒီနေ့လေတိုက်မယ်" လို့ ပြောတိုင်းမှန်နေတာမို့ အဖွဲ့သားတွေက အံ့ဩနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ရက်မှာ အဘိုးအိုက ရောက်မလာတော့လို့ အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ကို လွှတ်ပြီးသွား မေးခိုင်းတော့ အဘိုးအို ပြန်ပြောလိုက်တာက "ငါ့ရေဒီယိုပျက်သွားတယ်ကွ။ မိုးလေဝသ အစီအစဉ် နားထောင်လို့ မရတော့ဘူး" တဲ့။
မောင်ဝ သည် တစ်ရက် အထက်တန်း စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် ညနေစာ ဝင်ရောက်စားသောက်သည်။ စားသောက်နေရင်း နှင့် မောင်ဝသည် လေလည် အရမ်း လည်ချင်လာသည်။ ဆိုင်ထဲတွင် သီချင်းသံကလဲ အရမ်းကျယ်ကျယ် ဖွင့်ထားသဖြင့် မောင်ဝသည် အကြံရကာ တီးလုံးသံ အမြင့်ဆုံးရောက်ချိန်တိုင်း အားရပါးရ လေလည်လိုက်သည်။
တစ်လုံး နှစ်လုံး လောက် အားရပါးရ လေလည်ပြီးသွားချိန်တွင် မောင်ဝ သည် အင်မတန်မှကျေနပ်သွားပြီး ဘေးဘီသို့ အသာလေ လှည့်ကြည့်လိုက်သော်အခါ.. ဆိုင်ထဲမှ လူများအားလုံးသည် မောင်ဝအား စိုက်ကြည့်နေကြသည်။ တစ်ချို့လဲ မျက်နှာရှုံ့ နှာခေါင်းပိတ် ထားကြသည် ကိုတွေ့လိုက်သော်အခါ မောင်ဝလဲ အံသြသွားပြီး တစ်စုံတစ်ခုအား သွားသတိရလိုက်သည်။ "သွားပါပြီး.. လက်စက်သက်တော့ သီချင်းသံက ငါ I pod ကလာနေတာကို.... "
ဆေးခန်းတစ်ခန်းသို့ လူတစ်ဦးရောက်လာပြီး ဆရာဝန်အား -
“ကျွန်တော် အခုတလော အလိုလိုနေရင်း မောပန်းပြီး မအီမလည်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် အာရုံစိုက်လို့မရဘူး။ စိတ်ကလည်း တိုချင်တယ်ဆရာ”
“ခင်ဗျားပြောတာတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ လက္ခဏာတွေပဲ၊ ဒါနဲ့နေပါဦး ဘယ်တုန်းကစဖြစ်တာလဲ”
“မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော့်မိန်းမဆုံးတဲ့နေ့ကပဲ ဆရာ”
“မဟုတ်ဘူး ဆရာ။ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားတဲ့သူက AIDS ရောဂါ ကျွန်တော့်ဆီက ကူးလို့ဆိုပြီး သူဆုံးခါနီး ခယ်မချောချောလေးကို မှာသွားလို့”
« Reply #261 on: June 06, 2011, 04:40:07 PM »
ဆရာဝန် - ခင်ဗျား တစ်နေ့ကို ရေ (၁၀) ခွက်သောက်ရမယ်။
လူနာ - အဲဒါတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဆရာ။
ဆရာဝန် - ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။
လူနာ - ကျွန်တော့်အိမ်မှာ ဖန်ခွက် (၄) လုံးလဲရှိလို့ပါ။
“အယ်လ်ဇိုင်းမား (သက်ကြီးသတိမေ့) ရောဂါရှင်တစ်ယောက် ဘေးအိမ်သို့ရောက်လာပြီး အကျအနထိုင်စဉ် အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးက -
“ဘာလည်ရမှာတုံး၊ င့ါအိမ်ငါပြန်လာတဲ့ ဥစ္စာ”
“ဦးလေးတို့အိမ်က ဟိုဘက်အိမ်လေ၊ အိမ်မှားနေပြီ”
“ဟေ- ဟုတ်လား၊ ဒါကြောင့်ထင်တော့ ထင်သား၊ ငါ့အမျိုးသမီးက ဒီလောက်ရုပ်မဆိုးပါဘူးလို့”
``ဟေ့ကောင်၊ လေထီးမပါဘဲ ခုန်ဆင်းမလို့လား မင်းရူးနေသလားကွ ဟေ..´´
« Last Edit: June 08, 2011, 11:10:13 AM by tunaye2011 »
« Reply #262 on: June 06, 2011, 04:49:52 PM »
ကွန်ပျူတာ စာသင်ခန်းတစ်ခုတွင် သင်တန်းဆရာက မြန်မာစာလက်ကွက်ရိုက်နည်း စသင်မည့်နေ့တစ်နေ့တွင် ဖြစ်သည်။
“အားလုံးနားထောင်ပါ။ Microsoft Word ထဲမှာ မြန်မာစာရိုက်ဖို့ Font ပြောင်းပြီးရင် Caps Lock Key ကို ပိတ်ရိုက်ရမယ်။ ကဲ… စရအောင်”
ထိုအချိန်တွင် အခန်းနောက်ဆုံးတွင် ထိုင်နေသော ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဆီမှ …
“ဖြောင်း” ဟူသော အသံတစ်ခုကြားလိုက်ရာ သင်တန်းဆရာက ထိတ်လန့်သောအသံဖြင့်…
“ဟေ့ ဟိုနောက်ဆုံးက ဘာဖြစ်တာလဲ”
“ဆရာက Caps Lock Key ကို ပိတ်ရိုက်ဆိုလို့ ရိုက်လိုက်တာပါ။ ဒါတောင် အားမပါသေးဘူး ဆရာ”
စိတ္တဇ ဆေးရုံ တစ်ခုမှာ ဆရာဝန်တွေဟာ ပြန်ကောာင်းလာတဲ့ လူနာတွေကို ပြန်လွတ်ပေးဖို့စဉ်းစားကြပါတယ်။
အဲဒီမှာ သူတို့ဟာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခု လုပ်ကြပါတယ်။
Video ပြစက်ရှေ့မှာ ရှိတဲ့ ထိုင်ခုံတွေကိုဆေးသုတ်ပြီးတော့သူတို့ကို Video ပြပါတယ်။
ဘယ်သူကများ ဆေးသုတ်တာကို သိမလဲလို့ စမ်းသပ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ကတော့ ထိုင်ခုံတွေကို သေသေချာချာ ကြည့်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ထိုင်ခုံမှာဖြန့်ခင်း ပြီးမှထိုင်တယ်။
ဆရာဝန်တွေက ဒီလူတော့ရောဂါပျောက်သွားပြီဆိုပြီး အိမ်ကို ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
"ရှင် ထိုင်ခုံတွေမှာ ဆေးသုတ်ထားတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား , ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ?"
« Reply #263 on: June 06, 2011, 04:56:09 PM »
ကောင်မလေး- "ရှင်ကျွန်မကို နမ်းနေတာ ဖေဖေမမြင်စေနဲ့နော်"
ကောင်လေး- "ကိုယ်မင်းကို မနမ်းရပါလား"
ကောင်မလေး- "ဟုတ်ပါတယ်၊ တကတည်းမှပဲ…နမ်းမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ"
လူတစ်ဦး ကားတိုက်ခံရပြီး ဆေးရုံသို့ ရောက်လာသည်။
သတင်းကြားသဖြင့် ဆေးရုံသို့ လိုက်လာသော ၄င်း၏ဇနီးက ဝမ်းသာအားရပြောသည်။
"မောင်ရယ်၊ ကံကောင်းလိုက်တာနော်။ မနေ့ကပဲ မောင် မတော်တဆမှုအတွက် အာမခံ လုပ်ထားလိုက်တယ်။ ဟော … ဒီနေ့ပဲ ကားတိုက်ခံရပြီ"
အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ဆွဲလာသော စိန်ဘယက်ကိုကြည့်ပြီးဧည့်သည်အားလုံးက
အားပါးတရကြည့်ပါစေဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဘယက်ကိုချွတ်ပေးသည်။
« Reply #264 on: June 06, 2011, 05:17:55 PM »
ပါမောက္ခက ကျောင်းသားအား နောက်ဆုံး စာမေးပွဲအတွက် လူတွေ့ စစ်မေးနေသည်။
" ရွှေ နဲ့ အသိဥာဏ် နှစ်ခုယှဉ်လာရင် မင်းဘာကို ရွေးချယ် မလဲ "
" ရွှေကို ယူမှာပေ့ါ "
" ဆရာကတော့ အသိဥာဏ်ကို ယူမယ် ၊ ဘာကြောင့်လဲ သိလား "
" သိပါတယ် ၊ မိမိမှာ မပြည့်စုံတာကို ယူချင်ကြတာဟာ လူ့သဘာဝပဲ
အဘိုးကြီးဂျွန်က သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်မှာ ဇနီးနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ကို သူမှာချင်တာတွေမှာ နေပါတယ်။
" မိန်းမရေ .. ငါသေသွားတဲ့ အခါ ဘေးအိမ်ကလယ်သမားကြီးဂျုံးကို လက်ထပ်ပါကွာ" လို့ ပြောတော့
"အို .. ကျွန်မရှင်မရှိတဲ့နောက် ဘယ်သူ့ကိုမှ လက်မထပ် နိုင်ပါဘူး အဘိုးကြီးရယ်"လို့ ပြောပါတယ်။
ဇနီးဖြစ်သူက ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးတဲ့အခါ
သူပြန်ပြောတာက"ဂျုံးက မြင်းအရောင်းအဝယ်တစ်ခုမှာ ငါ့ကိုလိမ်ဖူးတယ်ကွ'
« Reply #265 on: June 06, 2011, 07:31:15 PM »
မိုးကလဲရွာ ထီးကလဲ မပါတာနဲ့
လူတစ်ယောက် ခရစ်ယာန် ဘုန်တော်ကြီးဆီမှာ အပြစ်ဝန်ခံနေသည်။
ိုလူ ။ ။ဖားသား တပည့်တော်အပြစ်ဝန်ခံချင်လို့ပါ။
ဘုန်တောကြီး။ ။ပြော ငါ့သား
ိုလူ ။ ။ကျွန်တော် တနေ့ကသူငယ်ချင်းတယောက်အိမ်သွားလည်တာ သူငယ်ချင်လည်းမရှိဘူး
သူ့မိန်းမပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့် မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးပြန်မယ်လည်းလုပ်ရော ရုတ်တရက်
မိုးကရွာပါလေရော။ခက်တာက ကျွန်တော့်မှာ ထီးကလည်းမပါဘူး။ဒီတော့ မိုးကလည်းရွာ
ထီးကလည်းမပါနဲ့ သူငယ်ချင်းမိန်းမနဲ့ မှားပါလေရော။
ဘုန်းတော်ကြီး။ ။အင်းလေး ပြန်ချင်စိတ်ရှိပါလျက် မိုးကလည်းရွာ
ထီးကလည်းမပါဆိုတော့ သိပ်ပြီး အပြစ်မရှိပါဘူး
ိုလူ ။ ။တနေ့က ခယ်မအိမ်သွားအလုပ်ရှိလို့သွားတာ
ဘုန်းတော်ကြီး။ ။အင်းလေး ပြန်ချင်စိတ်ရှပါလျက် မိုးကလည်းရွာ ထီးကလည်းမပါဆိုတော့
ိုလူ ။ ။ဟိုနေ့ကလည်း ယောက်ခမအိမ်သွားတော့ မိန်းမရဲ့မောင်ကလွဲ့ပြီး
အမတွေနဲ့နေပါများလို့ နည်းနည်းခြောက်နေတယ်။ပြန်မလို့လည်းပြင်ရော ထုံစံအတိုင်း
မပါနဲ့ မိန်းမရဲ့မောင်နဲ့ မှားခဲ့မိပြန်ရော။
ဘုန်းတော်ကြီးက အနည်းငယ်ကြောက်ရွံ့သော အသံနှင့်ပြောသည်။
ဘုန်းတော်ကြီး။ ။ အခုကောထီးပါလား....
လူ ။ ။မပါဘူးလေ ဘာဖြစ်လို့လည်း။
ဘုန်းတော်ကြီး။ ။မိုးအုံ့နေပြီ မြန်မြန်ပြန်တော့။
« Reply #266 on: June 06, 2011, 08:10:55 PM »
ဆရာကြီး အိမ်စာရေးခိုင်းလိုက်တဲ့ စာစီစာကုံးကို
မြန်မာဓလေ့တွင် တို့ဆရာသည် မပါမဖြစ် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့မိသားစုလည်း တို့ဆရာကို နှစ်သက်ကြပါသည်။
ကျွန်တော့်ထမင်းချိုင့်အတွက် မနက်စောစော မေမေ ဈေးသွားလျှင် တို့ဆရာအတွက် တစ်ခုခုဝယ်လာပေးရန် ဖေဖေကအမြဲသတိပေးပါသည်။
ဘူးသီး၊ သခွားသီး၊ ခရမ်းကြွတ်သီး၊ဒညင်းသီးစသည့်ရာသီပေါ်
အသီးအနှံများ၊ ဆလတ်ရွက်၊ရှောက်ရွက်၊စသည့်ရာသီပေါ်အရွက်များ၊ ခံတက်ချဉ်၊ မုန်လာချဉ်စသည့်ချဉ်ပတ်များဟူ၍တို့ဆရာများစွာရှိပါသည်။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတို့ဆရာမှာ ငါးပိရည် နှင့် ဒညင်းသီးဖြစ်ပါသည်။
ကဲ. ကြည့်၊ သားဘာမှားလို့လဲ။ဆရာကြီး
Forward Mail မှ ရပါသည်။
« Reply #267 on: June 06, 2011, 08:19:48 PM »
၂၁ ရာစုအစမှာပဲ စက်ရုပ်တွေဟာ လူတစ်ယောက် လိမ်တယ် မလိမ်ဘူး
ဆိုတာကို မျက်နာကြည့်ပြီး သိနိုင်အောင် တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ကိုဇော်ဂျီနဲ့ ပွင့် တို့ရဲ့ သားလေး မောင်မောရစ်တစ်ယောက် အိမ်ကို နောက်ကျပြီးမှပြန်ရောက်လာသည်။
။ ။ သား မင်းဘာလို့ ကျောင်းနောက်ကျတာလဲ။
မောင်မောရစ် ။ ။ ဒီနေ့ကျောင်းက အချိန်ပိုရှိလို့ နောက်ကျတာအဖေရဲ့။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ ဘေးမှာရှိနေတဲ့စက်ရုပ်က မောင်မောရစ်ပါးကို
။ ။ ဒီစက်ရုပ်က လိမ်ပြောတာကို အာရုံခံစားနိုင်တဲ့ စက်ရုပ်ကွ။
မောင်မောရစ် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့. .. ကျနော်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်နေတာပါ။
ကိုဇော်ဂျီ ။ ။
မောင်မောရစ် ။ ။ "The Ten Commandments" ဇာတ်ကားပါ။
စက်ရုပ်က ရိုက်ထည့်လိုက်ပြန်သည်။ မောင်မောရစ်တစ်ယောက်
မောင်မောရစ် ။ ။ ဟုတ်...ဟုတ်..
Sex Queen ဇာတ်ကားပါ။
ကိုဇော်ဂျီ အတော် ပေါက်ကွဲသွားသည်။
ကိုဇော်ဂျီ ။ ။ မင်းမရှက်ဘူးလားကွ ဒါမျိုးဇာတ်ကားကြည့်တာ။
မင်းအသက်အရွယ်လောက်တုန်းက ငါဒါမျိုးရှက်စရာဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး။
ကိုဇော်ဂျီကို စက်ရုပ်က ပါးချလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ချေသည်။
ပွင့် မီးဖိုချောင်မှ ထွက်လာပြီး ပြောလိုက်သည်။
ပွင့် ။ ။ ရှင်လည်း လိမ်တာပါပဲလား။ အင်းလေ.. ရှင်နဲ့တူမှာပေါ့ အဲဒါရှင့်သားပဲလေ ။
« Reply #268 on: June 06, 2011, 08:21:20 PM »
အတိုဆုံးလမ်းကို ကျေးဇူးပြုပြီး ညွန်းပြစေချင်ပါတယ်”
“၀မ်းနည်းပါတယ် ၊ မပြနိုင်ပါဘူး”
“ အော် ၊ ခင်ဗျားက ဒီအရပ်က မဟုတ်ဘူးနဲ့ထင်တယ်”
“ဒီအရပ်သားပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က တက္ကဆီသမားပါ”
“ဂျင်နီ ၊ ယူ့ယောင်္ကျား အတော့်ကို ပိန် သွားပါလား ၊ ဘာဆေးသောက်သလဲ”
“ဘာဆေးမှ မသောက်ပါဘူး ၊ နေ့တိုင်းငါးသွားမျှားတယ်”
“ငါးမျှားတာနဲ့ ပိန်တာ ဘာဆိုင်လို့လဲ”
“ဆိုင်တာပေါ့ ၊ သူက သူမျှားလို့ ရတဲ့ငါးနဲ့မှ ထမင်းစားတာလေ”
« Reply #269 on: June 06, 2011, 08:23:24 PM »
“ခင်ဗျား ကျွန်တော်ကို ချည်းဘာဖြစ်လို့ တွန်းနေရတာလဲဗျာ”
“ကားက ဒီလောက်ကျပ်နေတဲ့ ဥစ္စာ လူရွှေးတွန်းနေရအုန်းမှာလား ဗျ”
အလုပ်သင်ဆရာဝန်မှ ၀ါရင့်သမားတော်ကြီးအား မေးသည်။
“ဒေါက်တာခင်ဗျာ ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါအတွက် ၊ ဘာဆေးညွန်းပေးလေ့ ရှိပါသလဲဗျာ”
“ဘာ ၊ ဘာ ၀မ်းနှုတ်ဆေး ၊ ဟုတ်လား ၀မ်းနှုတ်ဆေးက ချောင်းဆိုးတာကို
“၀မ်းနှုတ်ဆေးစားထားတဲ့ လူတစ်ယောက်က တော်ရုံ ၊ တန်ရုံနဲ့ ဘယ်ချောင်းဆိုးရဲတော့မလဲ ၊ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ”